Izibhambiso zeentombi zeVilgin: Thenga i-Remy Imifanekiso yeNdalo
ubeko olungagqibekangaUhlobo by popularityUhlobo ngokohlengahlengiso avarejiHlela ngokutshaUhlobo ixabiso: eliphantsi ukuya phezuluUhlobo ixabiso: phezulu ukuya phantsi
Bonisa i-12 KwikhasiBonisa i-24 KwikhasiBonisa i-48 Kwikhasi
Ebonisa zonke iziphumo 8
ikaliwe 4.69 ngaphandle 5
ikaliwe 4.79 ngaphandle 5
Iingxowa Zeenwele Ezibuhlungu
ikaliwe 4.65 ngaphandle 5
ikaliwe 4.80 ngaphandle 5
I-Bone Straight Bundle
I-VIRGIN I-REMY i-Hair Bundles
Lapha kwi-My HIAr Extensions, siyaziqhenya kwimveliso yethu. Izandiso zethu zenziwe kwaye zenziwe ngobugcisa kubasetyhini bombala ngabasetyhini bombala! I-brand yethu ithatha intombi eyi-Remy. Intombi ibonisa ukuba iinwele zikhululekile kwiikhemikhali ezinobungozi, kwaye i-Remy ithetha ukuba iinwele zezinwele zilungelelaniswe kwinqanaba elifanayo ukunciphisa imiba engxenyeni. Sinezandiso ezisebenzela bonke udade wethu. Inkampani yethu ingabizwa ngokuthi "i-Natural Hair Extensions" Kodwa sineenzuzo ze-divas zethu ezikhululekile!
Umgca wethu wokunyuselwa kweNdalo ubeka i-Curly, iKinky Curly, Coily, kunye ne-Afro Kinky! Ndiqinisekile ukuba unokufumana ukudibanisa kwakho okugqibeleleyo. Umgca wethu woLungiso oLungileyo ubeka i-Perm Yaki, iCoarse Yaki kunye neqoqo le-Kinky Straight. Zonke iimpahla zethu zinokuvalwa. I-Frontal iya kunikwa ngokukhawuleza kwisefu elizayo. Iimpahla zethu ziphezulu ze-100% intombi yentombi ye-Remy.
Ukuba ufunda le nto, ngoko uhamba ngendlela efanelekileyo yokufumana isisombululo esihle sezandiso ezingahlanganisi nje ngokumangalisa ngeenwele zakho kodwa ukukhuthaza ukukhula kweenwele. Izandiso ezifanelekileyo ezisetyenziswe ngokuchanekileyo zinokunceda iinwele zakho zikhule kwaye zakha izitayela ezikhuselekileyo zokukhusela. Yeka ukulimaza ikhefu lakho kunye nokuzama ukudibanisa nezinye izandiso zobuntombi zaseBrazil zaseRiby. Ukuphucula iinwele zakho zendalo, ungayitshintshi!